सेक्समा हुने कमजोरी र यसको उपचार, जानी राखौ
22775 पटक पढिएको
सेक्स कमजोर हुनाले पारिवारिक जीवन सफल नहुने देखिन्छ । हामीले यस विषयमा लामो अनुभव बटुलेका छौं । नियमित यौन क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्ति बीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ ।
खाना जति आवश्यक छ त्यति नै सेक्सको पनि आवश्यक छ जीवनमा । यौंन शक्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउने गर्नुभएको छ, होला । तर त्यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ । सेक्सको लागि औषधि होइन ईच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ ।
अध्ययनको अनुसार जो व्यक्ति दैनिक वा हप्तामा कम्तीमा दुई वा तीन पटकसम्म सेक्स गर्छ उसमा इरेक्टाईल डिस्फङसन (यौन दुर्वलता) त्यति हुँदैन जति सेक्स नगर्ने व्यक्तिमा हुन्छ किनभने सेक्स पटक-पटक गर्दा पेनाइल मसल्स बलियो हुन्छ ।
तपाईले नियमित रुपमा यौन सम्पर्क गर्ने गर्नुभएको छैन् भने तपाईलाई विभिन्न खालका समस्याहरु देखिन सक्छन् । किनभने सेक्स गर्दा एडोर्फीन हर्मोन अर्थात आनन्द दिने हर्मोन निस्कासन हुन्छ जो तनावलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ ।
सेक्समा सहभागी हुन नपाउँदा जसरी पुरुष डिप्रेशनमा जान्छन त्यस्तै गरी महिलालाई पनि असर पर्न सक्छ । एक अध्ययन अनुसार मेलाटोलिन, सेरोटोनीन र अक्सिटोसिन जस्ता हर्मोनहरु पुरुषको बीर्यमा रहन्छ जो सेक्स गर्दा महिलामा पुग्छ र महिलाको मुड बनाउन मद्धत गर्छ ।
यदि कुनै जोडीले सेक्सका लागि समय निकाल्न पाएनन् भने महिला वा पुरुष दुवैमा एक खालको रिस पैदा हुन्छ र यसले दुईबीच दरार पैदा हुनसक्छ । आज अधिकांश परिवार बिच डिभोर्स जस्ता घटनाको जन्म सेक्स कमजोर भएकाले हुने गरेको छ ।
सेक्स कमजोर हटाउन खाने औषधिहरु र फलफूलहरु
१. दूधमा अश्वगन्धाको चूर्ण आधा चम्चा हालेर बिहान र बेलुकी खाने गर्नुपर्छ । यसले यौन शक्ति बढाउनुका साथै शीघ्र पतनको समस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ ।
२. शुद्ध शिलाजीत भएसम्म सिहदर्बार वैद्य खानाको १ क्यापसुल दिनमा २ पटक दूधसंग खाने ।
३. आधा चम्चा प्याजको रस, आधा चम्चा मह र आधा चम्चा मिस्री मिलाएर बिहान र बेलुका खाने गर्नाले यौन क्षमता वृद्धि हुन्छ ।
४. अध्ययनका अनुसार दैनिक स्याउ खाँदा स्वस्थ महिलाको यौन क्षमता बढ्छ । स्याउमा पोलिफेनाल्स र एन्टीआक्सिडेन्ट हुने गर्दछ । जसले यौन अंगमा रक्तप्रवाह बढाउन सहयोग गर्दछ । यसबाट महिलामा कामोत्तेजना थप बढाउने गर्दछ ।
५. Virilex Dragees दिनमा २ पटक दुधसंग खाने यसले सेक्स पावर क्रमश: बढाउदै जान्छ ।
नोट : सेक्स सम्बन्धि कुनैपनि समस्या देखिएमा ९८५७०४०२९८ मा फोन गर्नुस् वा स्थानीय हस्पिटलका डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउनुहोस् ।
पिनास र यसको प्रभावकारी उपचार
भिटामिन बढी वा कम भए के हुनसक्छ ? जानी राखौ
रूघाको उपचार औषधि होइन ध्यान दिन सक्नुपर्छ खानपानमा